အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (2019) မှ၎င်း၏ထူးခြားသော sensitivity ကို၏အစိတ်အပိုင်းများ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
စိတ္တဇနှင့်လင့်ခ် - J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2019 ဖေဖော်ဝါရီ 9; 72: 10-13 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2019.01.006 ။
ဘရောင်းဂျေအေ1, Wisco JJ2.
နိဒါန်း: ဤအကျဉ်းချုပ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်၏အာရုံတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကို၏ထူးခြားသောခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မ Paradigm အကြားဆက်ဆံရေးလည်းမရှိရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
နည်းနာ: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, neuroplasticity, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, လိင်နှင့်ညစ်ညမ်း: အဆိုပါ EBSCO သုတေသနဒေတာများအခြေစိုက်စခန်းကိုအောက်ပါသော့ချက်အသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
ရလဒ်: အဆိုပါစာပေဟာရင့်ကျက်ဦးနှောက်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောသောဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်: တစ်ဦးနု prefrontal cortex နဲ့ Over-တုံ့ပြန်မှု limbic နှင့် striatal ဆားကစ်, neuroplasticity, overactive dopamine စနစ်, တစ်ခြိမ်း HPA ဝင်ရိုး, testosterone ဟော်မုန်း၏လုပ်ခဲ့ပြီးအဆင့်ဆင့်နှင့် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းများ၏ထူးခြားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်ကာလကြီးထွား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရန်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု delineated ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော့ချက်ဒေသများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ထပ်တူမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုဖော်ပြထားသည်အတူတူပင်လိင်ဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်၏တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်သောအလုပ်လုပ်မော်ဒယ်အကျဉ်းချုပ်။
နိဂုံးချုပ်: အဆိုပါစာပေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အမှန်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုပိုမိုထိခိုက်မခံမည်အကြောင်းအကြံပြုပေမယ်ကြောင့်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများတစ်မရှိခြင်းဤမေးခွန်းကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဖြေမရနိုင်ပါ။ အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အကြံပြုချက်များထပ်မံယနေ့၏ဤသက်ဆိုင်သောလယ်ပြင်၌အလုပ်တိုးမှပေးအပ်ထားတယ်။
KEYWORDS: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်; ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု; Neuroplasticity; ညစ်ညမ်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း
ဤအကျဉ်းချုပ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒအရဆက်နွယ်မှုရှိမရှိစူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ EBSCO သုတေသနဒေတာဘေ့စ်များကိုအောက်ပါသော့ချက်စကားလုံးများဖြင့်ရှာဖွေခဲ့သည် - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြောင်းလဲမှုများကြောင့်လွှမ်းခြုံနေသောကလေးဘဝနှင့်လူကြီးများအကြားကာလ (Ernst, Pine, & Hardin, 2006) ဖြစ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောပုံစံများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၁) ရင့်ကျက်သော prefrontal cortex နှင့်တုန့်ပြန်မှုလွန်ကဲသော limbic နှင့် striatal circuits (Dumontheil, 1; Somerville & Jones, 2016; Somerville, Hare, & Casey, 2010; Van Leijenhorst et al ။ ) , 2011; Vigil et al, 2010 ။ ); neuroplasticity များအတွက် 2011) တစ် ဦး ကမြင့်ကာလ (McCormick & Mathews, 2; Schulz & Sisk, 2007; Sisk & Zehr, 2006; ။ Vigil et al, 2005); ၃) အလွန်အကျွံမသုံးခြင်း dopamine system (Andersen, Rutstein, Benzo, Hostetter, & Teicher, 2011; Ernst et al ။ , 3; Luciana, Wahlstrom, & White, 1997; Somerville & Jones, 2005; Wahlstrom, White, & Luciana, 2010) ; ၄) HPA ၀ င်ရိုးသိသာထင်ရှားသောအချက် (Dahl & Gunnar, 2010; McCormick & Mathews, 2010; Romeo, Lee, Chhua, McPherson, & McEwan, 4; Walker, Sabuwalla, & Huot, 2009); 2007) testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်မှုအဆင့် (Dorn et al ။ , 2004; Vogel, 2004; Mayo Clinic / Mayo Medical Laboratories, 5); နှင့် ၆) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ပြတင်းပေါက်အတွင်း ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် steroid hormones (cortisol နှင့် testosterone) သည်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု (Brown & Spencer, 2003; Peper, Hulshoff Pol, Crone, Van Honk, 2008; Sisk & Zehr, 2017; Vigil et al ။ , 6) ။
Blakemore နှင့် Robbins (2012) အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏ Hyper-တုံ့ပြန်မှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောဆုလာဘ်စနစ်၏ nonlinear ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်တုန့်ပြန်တားစီး၏အတော်လေးနှေးကွေး, linear ဖွံ့ဖြိုးရေး, အကြား dissociation ဤဝိသေသစွပ်စွဲ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဟာ limbic စနစ်၏ amygdala မြှင့်လုပ်ဆောင် (။ Ferretti et al, 2005; Karama et al, 2002; ။ Redoute et al, 2000; ။ Walter ဟာ et al, 2008 ။ ) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ activation concomitantly အောက်ပါစတင်: 1) ကို hypothalamus ဦးနှောက်ကို stem နှင့် epinephrine နှင့် norepinephrine ၏စနစ်တကျဖြန့်ချိမှုအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏စာနာဌာနခွဲစတင်ကျောရိုးထဲမှာအာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်; 2) ကို hypothalamus အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) ဝင်ရိုး (Viau, 2002) မှတဆင့် hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးနှင့် testosterone ဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်မှတဆင့် cortisol လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရရှိလာတဲ့သည် pituitary gland လှုံ့ဆော်; 3) ကနျူကလိယ accumbens dopamine မှတဆင့် activated ဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်သည့် amygdala နှင့်၎င်း၏ innervations ၏သုံးသပ်ချက်ကိုနှင့် somatic ဖြစ်စဉ်များ၏စည်းမျဉ်းများအတွက် Mirolli, Mannella နှင့် Baldassarre (2010) ကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ function ကိုလျော့နည်းသွားသည်နှင့် Basal ganglia ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် neurotransmitters များလွှတ်ပေးရေးရန်တိုးပွါး (Arnsten, 2009; ။ Hanson et al, 2012; Radley, 2005) ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဂရိဆယ်ကျော်သက်များအကြားလူမှုရေးမမှန်မကန်ပြုပြင်မှုများနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည် (Tsitsika et al ။ , 2009) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လျှော့စျေးကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်အတွက်နောင်လာမည့်ရလဒ်များကိုလျှော့ချလိုသည့်လူတစ် ဦး ၏စိတ်သဘောထား (Negash, Sheppard, Lambert, & Fincham, 2016) မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ Negash နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ပျမ်းမျှအသက် ၁၉ နှစ်နှင့် ၂၀ ကြားရှိသောနမူနာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာရေးသူကဇီဝဗေဒအရဆယ်ကျော်သက်များဟုသတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်ဟုစာရေးသူကမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့၏နမူနာများသည်စွဲလမ်းစေခြင်း (သို့) အတင်းအကျပ်စေခိုင်းသောအသုံးပြုသူများဖြစ်ခြင်းကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိသော်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသနေဆဲဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုသည် mesolimbic dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာရုံကြောပလပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည် (Hilton, 2013) ။ MRI စစ်ဆေးမှုသည်တစ်ပတ်လျှင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့် dorsolateral prefrontal cortex နှင့်မှန်ကန်သော caudate ရှိမီးခိုးရောင်အမှုန်များကြားသိသိသာသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် (Kuhn & Gallinat, 2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ဤအာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအားပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောကြိုတင်စည်းကမ်းချက်ကိုမပယ်ဖျက်နိုင်ပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ပါကအရွယ်ရောက်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် amygdala နှင့် HPA ၀ င်ရိုးကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည် prefrontal cortex ကိုပိုမိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိ Basal ganglia ကိုပိုမိုတက်ကြွစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအခြေအနေသည်တားဆီးနှိမ်နှင်းခြင်းနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းတို့ပါဝင်သောအလုပ်အမှုဆောင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်လို့ neuroplasticity ကိုပိုအထောက်အကူပြုတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ off-line” ဟုခေါ်သော prefrontal cortex သည် subcortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောသိမ်မွေ့သောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်။ neuroplasticity မညီမျှမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အားမိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းနှင့် impulsivity ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ပိုမိုကြီးထွားသော subcortical circuit ကို ပိုမို၍ အားနည်းစေသည့် cortical circuit ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ရဲ့နျူကလိယ accumbens, ဒါမှမဟုတ် ဦး နှောက်၏အပျြောအပါးစင်တာ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ချဲ့ကားလှုံ့ဆော်မှုရှိလိမ့်မယ်။ dopamine တိုးများလာခြင်းက dopamine နှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုနှင့်တဏှာကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည် (Berridge, 2006; Volkow, 2006) ။
testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်အရွယ်ရောက်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄ င်း၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွားလာမှုသည်ကျူးကျော်မှုတိုးများလာစေနိုင်သည် (Banks & Dabbs, 1996; Goetz et al, 2014; Nelson, Leibenluft, McClure, & Pine, 2005; Schulz & Sisk, 2006) နှင့်လိင်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက် (Amstislavskaya & Popova, 2004; Bonilla-Jaime, Vazquez-Palacios, Arteaga-Silva, & Retana-Marquez, 2006; Exton et al, 1999; ။ Redoute et al, 2000; Stoleru et al, 1999; ။ ။ )
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်ကြောင့် cortisol နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတို့သည် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုး၏မွေးရာပါရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုထူးခြားစွာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဤသက်ရောက်မှုကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ရှာ။ မရပါ။ cortisol နှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကာလအတွင်း neuroplasticity ကိုမောင်းနှင်ရန်အလားအလာရှိပြီးလူကြီးဘဝမှပင်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် (McEwen, 2004; Tsoory & Richter-Levin, 2006; Tsoory, 2008; McCormick & Mathews, 2007; 2010) ။ အဆိုပါ amygdala post အပျိုဖော်ဝင်၏ကြံ့ခိုင်မှု, အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အရေးပါဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့၏ပြင်းအားပေါ်တွင်မူတည်သည် (De Lorme, Schulz, Salas-Ramirez, & Sisk, 2012; De Lorme & Sisk, 2013; Neufang et al, 2009; ။ Sarkey, Azcoitia, Garcia- Segura, Garcia-Ovejero, & DonCarlos, 2008) ။ တစ် ဦး ကအားကောင်းတဲ့ amygdala စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ် Self- စည်းမျဉ်းလျှော့ချ (Amaral, 2003; Lorberbaum et al, 2004; ။ De Lorme & Sisk, 2013) ။
ဤစာတမ်းသည်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုစတင်ရှာမြီးကောင်ပေါက်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ထူးခြားသောခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မ Paradigm မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်နိုင်မလား လက်ရှိစာပေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အမှန်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုပိုမိုထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများ၏မရှိခြင်းဤမေးခွန်းကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဖြေမရနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများအဘို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားအားဖြင့်ပြုပြင်၏စိန်ခေါ်မှုလည်းဤမြေကွက်၌သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်မှုဆီသို့သိသိသာသာ, နားလည်ဆိုသော်ငြားအတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက start အဖြစ်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှကနဦးထိတွေ့မှုရှေ့၌၎င်း, ထိတွေ့မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီပြီးနောက်အပြုအမူသဘောထားတွေကိုမေးမြန်းကြောင်း Self-အကဲဖြတ်စစ်တမ်းများသုံးပြီးလူဦးရေလေ့လာမှုများပို့ချအကြံပြုပါသည်။ စစ်တမ်းများအစမိဘကကလေးကြားဆက်ဆံရေးကလေးတစ်ဦးကျန်းမာရေး Self-ထိရောက်မှုဆီသို့သိသိသာသာအချက် (နှင့်ကျောင်းသင်စွမ်းဆောင်ရည်) ဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်မှမိဘများအားပေးပြီးမှနိုငျသညျ။
စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်သုတေသန Avenue လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့မြီးကောင်ပေါက်တစ်တံခါးပေါက်အဖြစ်နည်းပညာ၏အခန်းကဏ္ဍသည်။ အမှန်တကယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံများနှင့်ရိပ်မိအသုံးပြုမှုကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှ Self-အကဲဖြတ်ရန်သူတို့ရဲ့နည်းပညာအသုံးပြုမှုနှင့်ထိတွေ့မှုမှသင်တန်းသားများကိုမေးပါသည်ဟုစစ်တမ်းများလုပ်ဆောင်သွားရန်တစ်ဦးမျှမျှတတဖြောင့်-ရှေ့ဆက်လေ့လာမှုလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်ဤနယ်ပယ်တွင်တစ်ထိပ်တန်းအလှူငွေ, စာရွက်စာတမ်းများဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့်မှန်မှန်စီစဉ်ထားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ် MRI ကနေခန္ဓာဗေဒဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတစ်ဆင့်နှင့်လူကြီး concomitant သို့သားသမီးများ၏အုပ်စုတစုကိုအောက်ပါပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့တစ် longitudinal လေ့လာမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ် နှင့် / သို့မဟုတ်ပေပုံရိပ်။
Amar, DG (2003) ။ အဆိုပါ amygdala, လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်အန္တရာယ်ထောက်လှမ်း။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, 1000, 337-347 ၏ရာဇဝင်။ https://doi.org/10.1196/
Amstislavskaya, TG, & Popova, NK (2004) ။ အထီးကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်အမျိုးသမီး - သွေးဆောင်လိင်စိတ်နှိုးဆွ: အပြုအမူနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ၊ ၄၆ နှစ်၊
Andersen က, SL, Rutstein, အမ်, Benzo, JM, Hostetter, JC, & Teicher, MH (1997) ။ dopamine အဲဒီ receptor overproduction နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ NeuroReport,
Arnsten, AFT (2009) ။ prefrontal cortex ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအယှက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းအချက်ပြစိတ်ဖိစီးမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 10 (6), 410-422 Reviews ။ https://doi.org/
10.1038 / nrn2648 ။
ဘဏ်များ, တီ, & Dabbs, JM, Jr. (1996) ။ တစ် ဦး ဆိုးသွမ်းနှင့်အကြမ်းဖက်မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုအတွက်တံတွေး testosterone ဟော်မုန်းနှင့် cortisol ။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 136 (1), 49-56 ။
Berridge, KC (2006) ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ over နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု - မက်လုံးများလွန်းခြင်းအတွက်ကိစ္စ။ Psychopharmacology, 191, 391-431 ။ https://doi.org/10.1007/
Blakemore, အက်စ် (2012) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လူမှုရေးဦးနှောက်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ဆေးပညာ၏ Royal Society ၏ဂျာနယ်, 105, 111-116 ။ https://doi.org/10.1258/jrsm.2011 ။
Blakemore, အက်စ်, & Robbins, TW (2012) ။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ သဘာဝအာရုံကြောသိပ္ပံ, 15 (9), 1184-1191 ။ https://doi.org/10.1038/nn.3177 ။
Bonilla-Jaime, အိပ်ချ်, Vazquez-Palacios, G. အ, Arteaga-Silva, အမ်, & Retana-Marquez, အက်စ် (2006) ။ ယောက်ျားကြွက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေများမှဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု။
ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 49, 376-382 ။
ဘရောင်း, GR, & Spencer, KA (2013) ။ Steroid ဟော်မုန်းများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက် - နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအမြင်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, 249, 115-128 ။ https://doi.org/10 ။
1016 / j.neuroscience.2012.12.016 ။
Dahl, RE, & Gunnar, MR (2009) ။ အပျိုဖော်ဝင်ရင့်မှည့်ချိန်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများမြင့်တက်လာခြင်း၊
ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology, 21, 1-6 ။ https://doi.org/10.1017/S0954579409000017 ။
De Lorme, KC, Schulz, KM, Salas-Ramirez, KY, & Sisk, CL (၂၀၁၂) ။ pubertal testosterone ဟော်မုန်းသည်ဒေသတွင်းအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အာရုံခံနံပါတ်ကိုစုစည်းပေးသည်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ amygdala ။ ဦးနှောက်သုတေသန 1460, 33-40 ။ https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.04.035 ။
De Lorme, KC, & Sisk, CL (၂၀၁၃) ။ pubertal testosterone ဟော်မုန်းအစီအစဉ်များသည်သင့်လျော်သော agonistic အပြုအမူနှင့်ဆီးရီးယားအထီးတွင်ရှိသောအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပုံစံများဖြစ်သည်
hamsters ။ စိတ်ပညာ & အပြုအမူ, 112-113, 1-7 ။ https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2013.02.003 ။
Dorn, ld, et al Dahl, RE, Williamson, DE, Birmaher, ခ, Axelson, ဃ, Perel, ဂျေ, ။ (2003) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမှတ်အသားများ: pubertal ၏လေ့လာမှုများအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်များ။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 32 (5), 315-324 ။
Dumontheil, ဗြဲ (2016) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ အပြုအမူသိပ္ပံအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်, 10, 39-44 ။ https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2016.04.012 ။
Ernst, အမ်, နယ်လ်ဆင်, EE, Jazbec, အက်စ်, လူယာ, eb, ရဟန်းတော်, CS, Leibenluft, အီး, et al ။ (2005) ။ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens
လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်။ NeuroImage, 25, 1279-1291 ။ https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2004.12.038 ။
Ernst, အမ်, ထင်းရှူး, DS, & Hardin, အမ် (2006) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏ neurobiology ၏ Triadic မော်ဒယ်။ စိတ်ပညာဆေးပညာ, 36 (3), 299-312 ။
Exton, က MS, Bindert, အေ, Kruger, တီ, Scheller, အက်ဖ်, Hartmann, U. , & Schedlowski, အမ် (1999) ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့် endocrine ပြောင်းလဲခြင်း
အမျိုးသမီးတွေအတွက်အော်ဂဇင်။ Psychosomatic Medicine, 61, 280-289 ။
et al Ferretti, အေ, Caulo, အမ်, Del Gratta, C တို့, Di Matteo, R. , Merla, အေ, Montorsi, အက်ဖ်။ (2005) ။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Dynamics ကို: ဦးနှောက်ကို Activation ၏ထူးခြားသောအစိတ်အပိုင်းများ
fMRI အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသ။ NeuroImage, 26, 1086-1096 ။ https://doi.org/10.1016/j.neuromiage.2005.03.025 ။
Goetz, SMM, Tang, L. , Thomason, ME, Diamond, MP, Hariri, AR, & Carre, JM (2014) ။ Testosterone ဟော်မုန်းသည်ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်ရန်အာရုံကြောဓာတ်ပြုခြင်းကိုလျင်မြန်စွာတိုးပွားစေသည်
လူတို့သညျမြား: A ဝတ္ထု Two-ခြေလှမ်း pharmacological စိန်ခေါ်မှုပါရာဒိုင်း။ ဟားဗတ်, 76, 324-331 ။
Hanson, JL, Chung, MK, Avant, BB, Rudolph, KD, Shirtcliff, EA ၏, Gee, JC, et al ။ (2012) ။ prefrontal cortex အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူကွဲဆက်ဆံရေးဖျန်ဖြေ
အစောပိုင်းကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အကြား။ အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံ, 32 ၏ဂျာနယ် (23), 7917-7925 ။ https://doi.org/10.1523/jneurosci.0307-12.2012 ။
Hilton, DL (2013) ။ အပြာစာပေစွဲ - စွဲခြင်း - neuroplasticity ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် supranormal နှိုးဆွမှု။ လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံ & စိတ်ပညာ, 3, 20767 ။
Karama, အက်စ်, Lecours, AR, Leroux, ဂျေ, Bourgouin, P. , Beaudoin, G. အ, Joubert, အက်စ်, et al ။ (2002) ။ ခေါ်ဆောင်သွား၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ဒေသများတွင်
ရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 16, 1-13 ။ https://doi.org/10.1002/hbm.10014 ။
Kuhn, အက်စ်, & Gallinat, ဂျေ (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု။ ဂျေအေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ https://doi.org/10.1001/
Lorberbaum, JP, Kose, အက်စ်, ဂျွန်ဆင်, MR, Arana, GW, Sullivan က, LK, Hamner, ကို MB, et al ။ (2004) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မိန့်ခွန်း anticipatory စိုးရိမ်စိတ်၏အာရုံကြောဆက်စပ်
လူမှုရေး phobia ။ NeuroReport, 15 (18), 2701-2705 ။
လူစီယာနာ, အမ်, Wahlstrom, D. , & အဖြူ, တီ (2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ dopamine system လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုအတွက် Neurobehavioral အထောက်အထား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ & ဇီဝအပြုအမူ
reviews, 34 (5), 631-648 ။ https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.12.007 ။
Mayo Clinic ဆေးခန်း (2017) ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်း Mayo ။ စမ်းသပ်ခြင်း ID: TTFB testosterone ဟော်မုန်း, စုစုပေါင်း bioavailable နှင့်အခမဲ့, သွေးရည်ကြည်။ http://www.mayomedicallaboratories.com/ မှရယူရန်
စမ်းသပ်မှု-catalog / လက်တွေ့ + နှင့် + စကားပြန် / 83686 ။
McCormick, CM, & Mathews, IZ (2007) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိ HPA function - လိင်ဆိုင်ရာဟော်မုန်းများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဖိအားများနှင့်ထိတွေ့မှု၏တည်မြဲသောအကျိုးဆက်များ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 86, 220-233 ။ https://doi.org/10.1016/j.pbb.2006.07.012 ။
McCormick, C တို့, M ။ , & Mathews, IZ (2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, hypothalamic-pituitary-adrenal function ကိုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ပရိုဂရမ်းမင်း။
Neuro-psychopharmacology & ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု, 34, 756-765 အတွက်တိုးတက်မှု။ https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2009.09.019 ။
McEwen, ခ (2004) ။ စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, 1032, 1-7 ၏ရာဇဝင်။ https://doi.org/10.1196/annals ။
Mirolli, အမ်, Mannella, အက်ဖ်, & Baldassarre, G. အ (2010) ။ ခန္ဓာကိုယ်, ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူ၏အကျိုးသက်ရောက်စည်းမျဉ်းများတွင် amygdala ၏အခန်းကဏ္.ကို။ ဆက်သွယ်မှုသိပ္ပံ, 22, 215-245 ။
Negash, အက်စ်, Sheppard, N. , လမ်းဘတ်, မိုင်, & Fincham, FD (2016) ။ နောက်ပိုင်းတွင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရောင်းဝယ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းနှင့်လျှော့စျေးလျှော့ပေးခြင်း။ The
လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 53 (6), 689-700 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1025123 ။
နယ်လ်ဆင်, EE, Leibenluft, အီး, McClure, EB, & ထင်းရူး, DS (2005) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှု re- တိမ်းညွတ်: လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ် ဦး က neuroscience ရှုထောင့်
psychopathology ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ, 35, 163-174 ။ https://doi.org/10.1017/S0033291704003915 ။
Neufang, အက်စ်, Specht, K. , Hausmann, အမ်, Gunturkun, O. , Herpertz-Dahlmann, ခ, က Fink, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, et al ။ (2009) ။ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်အပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု
လူ့ဦးနှောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ဦးနှောက် Cortex, 19, 464-473 ။ https://doi.org/10.1093/cercor/bhn100 ။
ငရုတ်ကောင်း, JS, Hulshoff Pol, HE, Crone, EA, & ဗန် Honk, ဂျေ (2011) ။ အပျိုဖော်ဝင်အရွယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများတွင်လိင် steroids နှင့် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ - neuroimaging လေ့လာမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
neuroscience, 191, 28-37 ။
Radley, ဂျေ (2005) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ သုတေသနပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 4, 271-287 အိုမင်း။ https://doi.org/10.1016/j.arr.2005.03.004 ။
Redoute, ဂျေ, Stoleru, အက်စ်, Gregoire, အမ်, ကုန်ကျစရိတ်, N. , Cinotti, အယ်လ်, Lavenne, အက်ဖ်, et al ။ (2000) ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း,
11, 162-177 ။
Romeo, RD, Lee, SJ, Chhua, N. , McPherson, CR, & McEwen, BS (2004) Testosterone သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုကိုအသက်မရှင်သေးသောအထီးကြွက်များတွင်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။
Neuroendocrinology, 79, 125-132 ။ https://doi.org/10.1159/000077270 ။
Sarkey, အက်စ်, Azcoitia, ဗြဲ, Garcia-Segura, LM, Garcia-Ovejero,,, & DonCarlos, LL (2008) ။ ဦး နှောက်ထဲရှိဂန္ထ ၀ င်မဟုတ်သည့်နေရာများရှိဂန္ထဝင် androgen receptors ။ ဟော်မုန်း
နှင့်အပြုအမူ, 53, 753-764 ။
Schulz, KM, & Sisk, CL (2006) ။ အပျိုဖော်ဝင်ဟော်မုန်းများ၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများရင့်ကျက်ခြင်း - ဆီးရီးယားဟမ်းစတိုမှသင်ခန်းစာများ။ မော်လီကျူးနှင့်
ဆယ်လူလာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, 254-256, 120-126 ။ https://doi.org/10.1016/j.mce.2006.04.025 ။
Sisk, CL, & Zehr, JL (2005) ။ အပျိုဖော်ဝင်ဟော်မုန်းများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူများကိုစည်းရုံးသည်။ Neuroendocrinology, 26, 163-174 အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ https://doi.org/10.1016/
Somerville, LH, Hare, T. , & Casey, BJ (2011) ။ Frontostriatal ရင့်ကျက်မှုဆယ်ကျော်သက်အတွက် appetitive တွေကိုမှသိမြင်ထိန်းချုပ်မှုပျက်ကွက်ခန့်မှန်းထားသည်။ သိမှု၏ဂျာနယ်
neuroscience, 23, 2123-2134 ။ https://doi.org/10.1162/jocn.2010.21572 ။
Somerville, LH, & ဂျုံးစ်, R. (2010) ။ ပြောင်းလဲမှုအချိန်၊ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် sensitivity ကို၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ ဦး နှောက်
နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု, 72 (1), 124-133 ။ https://doi.org/10.1016/j.bandc.2009.07.003 ။
Stoleru, အက်စ်, Gregoire, MC, Gerard, ဃ, Decety, ဂျေ, Lafarge, အီး, Cinotti, အယ်လ်, et al ။ (1999) ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ Neuroanatomical Correlate ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 28, 1-21 ။
Tsitsika, အေ, Critselis, အီး, Kormas, G. အ, Konstantoulaki, အီး, Constantopoulos, အေ, & Kafetzis, D. (2009) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း
အသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ, 12 (5), 545-550 ။ https://doi.org/10.1089/cpb ။
Tsoory, အမ် (2008) ။ Juvenile စဉ်အတွင်းဖိအား exposure NCAM စကားရပ်အချိုးဖို့ PSA-NCAM ဖွံ့ဖြိုးရေး-related ပွောငျးလဲ disrupts for: အလားအလာဆက်စပ်မှု
ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်။ Neuropsychopharmacology, 33, 378-393 ။ https://doi.org/10.1038/sj.npp.1301397 ။
Tsoory, အမ်, & Richter-Levin, G. အ (2006) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလေ့လာခြင်းသည် 'လူငယ်' သို့မဟုတ် 'ဆယ်ကျော်သက်' စိတ်ဖိစီးမှုများအပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ နိုင်ငံတကာဂျာနယ်
Neuropsychopharmacology,9(6), 713-728 ။ https://doi.org/10.1017/S1461145705006255 ။
ဗန် Leijenhorst, အယ်လ်, Zanolie, K. , ဗန် Meel, CS, Westenberg, pm တွင်, Rombouts, SARB, & Crone, EA (2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်ကိုအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း။ ဦး နှောက်ဒေသများ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြန်ဖြေ။ ဦးနှောက် Cortex, 20, 61-69 ။ https://doi.org/10.1093/cercor/bhp078 ။
Viau, V. (2002) ။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-gonadal နှင့် adrenal ပုဆိန်အကြား functional Cross-ဆွေးနွေးချက်။ Neuroendocrinology, 14 ၏ဂျာနယ်, 506-513 ။
Vigil, P. , Orellana, RF, Cortes, ME, Molina, CT, Switzer, BE, & Klaus, H. (2011) ။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏ endocrine မော်ဂျူ: တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ ကလေးဂျာနယ်နှင့်
ဆယ်ကျော်သက်မီးယပ်, 24 (6), 330-337 ။ https://doi.org/10.1016/j.jpag.2011.01.061 ။
Vogel, G. အ (2008) ။ ကြီးပြင်းဖို့အချိန်။ သိပ္ပံအခုတော့ 2008 (863), 1 ။
Volkow, N. (2006) ။ dorsal striatum အတွက်ကိုကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံ, 26 ၏ဂျာနယ် (24), 6583-6588 ။
Wahlstrom, D. , အဖြူ, တီ, & Luciana, အမ် (2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ dopamine system လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုအတွက် Neurobehavioral အထောက်အထား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ & ဇီဝအပြုအမူ
reviews, 34, 631-648 ။ https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.12.007 ။
Walker က, EF, Sabuwalla, Z. , & Huot, R. (2004) ။ အပျိုဖော်ဝင်သည့်အာရုံကြောနှင့်စိတ်ရောဂါ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ပညာတို့။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ပညာ, 16, 807-824 ။
Walter ဟာ, အမ်, Bermpohl, အက်ဖ်, Mouras, အိပ်ချ်, Schiltz, K. , Tempelmann, C တို့, Rotte, အမ်, et al ။ (2008) ။ ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း fMRI-subcortical နှင့် cortical arousal အတွက်တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အထွေထွေစိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများကွဲပြားခြားနားသွား။ NeuroImage, 40, 1482-1494 ။ https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.01.040 ။